Kedụ ka m ga-esi chọọ igwe kwụ otu ebe m? - Bgba Ígwè
Isi > Bgba Ígwè > Ihe ịchọ mma igwe - ihe ngwọta na-adịgide adịgide
Kedụ ka m ga-esi chọọ igwe kwụ otu ebe m?
Icho mma gịaka, aka grips, na ọbụnanke gispokes na akwụkwọ mmado.
Ọ bụrụ na ị na-adịghị amasị agba nkeigwe kwụ otu ebe gị, I nwere ike iji osisi kpuchie etiti ya kpamkpam.
Ọ bụrụ na ị bụ onye ofufe nke ihe nakawa etu esi, i nwere ike idowe akwụkwọ mmado na gaghị agara tụrụ ofụri etiti nkeigwe kwụ otu ebe gịimepụta usoro.
Achọrọ m ịse igwe kwụ otu ebe m, ọ bụ nnukwu ụzọ iji hazie ya ma nye ya ndụ ọhụụ, mana m na-atụkarị ụjọ, ọ bụ nnukwu ọrụ iji gbaa igwe kwụ otu ebe mana ọ gafere ịgbachi gị ụmụ nwoke nyefere ụfọdụ nnukwu nkwalite na igwe kwụ otu ebe ị gbasasịrị na unu nwere mmụọ nsọ nke mere na m ga-anwale ya, emebeghị m nke a ma achọrọ m nduzi ọkachamara na onye ka Ali na Bex mma karịa Fatta Creations, ugbu a enwere ike ị soro ha na Instagram , ọ bụ n’ezie otu n’ime ihe ndekọ Instagram kachasị amasị m maka Ya mere, ka anyị zute ha n’ọgbakọ ha ma echere m na m nọ n’ebe kwesịrị ekwesị, lee ka ndị a si maa mma, daalụ maka ịhapụ anyị nke ahụ dị mma, ị nabatara nke ọma anyị ga-aka mma igosi gị ụlọ ọrụ Ali na ụlọ ọrụ Bex bụ akụ dị oké ọnụ ahịa maka okpokoro agba dị iche iche dị ka D. ị maara na m na-eme ihe ngosi DIY na otu n'ime igwe ochie m ma n'ezie na m ga-eme ya n'onwe m na diyi agaghị nwere nke ọ bụla n'ime ngwaọrụ ndị ahụ mara mma amaara m otu esi eme ya ma eleghị anya ọkara dị ka igwe kwụ otu ebe gị h N'ezie ihe bụ Frame ya, ka anyị leba anya n'ihe ị nwetara Yabụ nke a bụ igwe kwụ otu ebe m chọrọ ịgbanwe, kedụ ebe m ga-esi bido m chee na m ga-adọkpụ ya? Ihe niile gbadaa, gbapụ agba ahụ, ọ bụrụ na ị nwere igwe ma ọ bụ aluminom dị ka nke a ma ọ gaghị emebi emebi, chọta mpaghara emitter, ị maara na ha na-eji ájá dị mma ka ha ghara imebi aluminom nke ukwuu, mana ọ na-eme Na-enye gị ohere zuru oke maka agba ahụ. Nọgide na-ege ntị ma tụkwasị m obi, ma ọ bụrụ na ị nọrọ otu ụbọchị na-agbapụ agba ahụ na igwe kwụ otu ebe na-efu £ 30-35 iji mee ka ụdị a dị ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe emere ka ikwe ka ọ bụrụ ụgwọ. na ị ga-emefu ego nke ọma, enwere ihe ole na ole anyị kwesịrị ime iji mee ya, um, ọ bụrụ na ị fụọ ihe ihe agba ahụ na-apụ apụ ma ọ bụrụ na otu n'ime akwụkwọ mmado ahụ dị ebe a, otu n'ime ihe mmado mara mma a, ogidi anaghị agabiga nke ọma, ọ na-amịkọrọ ume nke ihe ọma ma yabụ gịnị ka ị ga-eji ya? ga-abanye na njedebe, mana ị ga-ejedebe na riiji ebe akụkụ nke aluminom na-arapara.
Ya mere, anyị ga-ehichapụ nke ọ bụla akwụkwọ mmado ahụ tupu anyị enweta ya na blaster, ị ga-enwekwa ngwụcha dị nro mgbe ị nwetara ya. Ọ dị jụụ ọzọ ebe ọ bụ na ndụdụ m bụ carbon enweghị m ike ịme ha na-enwu gbaa nwere na m ga-eme ka m gbue onwe m. Ali ga - ebutu ya na carbon, mana maka ọrụ a ọ ga - adị mma naanị iwepụ ya na logos ahụ iji mee ka ọ dị nro ma anyị agafee ya na A320 tupu anyị ebute ya mgbe anyị bidochara eku dị njikere ka a gbapụ ya ebe anyị nọ na ụlọ ọrụ Penfold metallization ebe m ga-enwe okpokolo agba m maka eserese, yabụ ka anyị gaa chọta Jed ma hụ ihe sandblasting bụ, lee ụlọ m mara mma, etiti ahụ adịla kpamkpam gbawara na nke a were ihe dị ka nkeji 15 ma dị mma karịa ka m gaara eme onwe m nke mere na enwere m ezigbo obi ụtọ na m mere ya ma ugbu a ọ bụ oge maka akụkụ egwu ahụ wetuo obi ihe niile dị njikere ugbu a ọ bụ oge maka agba siri ike ịnwụ ịhọrọ nke ahụ ihe m maara bu na achoro m ihe di obere obere ntakịrị na-enwu enwu ma eleghị anya ọ dị mma na enwere m agba ole na ole lee ihe ị chere kwekọrịtara na ha gbanwere n'ụzọ ụfọdụ ma mara mma lousy.
Nke a ga - ekwe omume site na aerosol, ị nwere ike iji aerosol mee ihe abụọ a, nke na - abụghị nsogbu, kpọpụ ha abụọ, ee, ruo mkpebi abụọ ahụ siri ike, yabụ na nke a bụ mgbanwe ụda olu abụọ maka igwe kwụ otu ebe ndị nrụpụta na-eji agba ahụ ugbu a ọ dịkwa ya? a mgbanwe site na-acha anụnụ anụnụ na-acha odo odo, nke a na-na-ise shades nke a bụ a bit ọzọ ikpọ karịa nke a ee m chere na m ga-aga a na m chere na m ga-aga a na m n'ezie na-amasị nke a otú ahụ ka m họọrọ nke m? Tee ma ihe m kwesiri iji mee ka nke a mee maka akara paụnd 100 ị nwere ike nweta ihe niile ịchọrọ ka ihe mbụ ịchọrọ bụ ihe mbụ ịchọrọ inweta, na ị ga - enweta ya niile n'ụdị aerosol, wee were nke ahụ agba mkpa ka agba agba igwe kwụ otu ebe nwa mbụ otú a na agba na-adabere na a mara mma nwa isi kootu otú i nwere a nwere nke nwa na mgbe ahụ na agba ya bụ Chromacoat akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke na-aga n'elu nwa isi kootu na-enye gị na mmetụta, na mgbe m ga-akwado uwe mkpuchi doro anya 2k, ya mere ọ bụ varnish, mana nke ahụ bụ 2k, yabụ ị na-agwakọta kemịkal abụọ dị iche iche, ọ bụ vakpo epoxy, naanị ihe nwere vkrik 2k bụ na o nwere ụfọdụ ihe na-adịghị mma na ya n'ihi ya ị kwesịrị n'ezie eyi nkpuchi, ma ọ dịkarịa ala ihe nkpuchi unyi ma mee ya n'èzí na ezigbo onye ofufe nke na-a suụ anwụrụ ọkụ ma ọ baghị uru ichere ụbọchị kwesịrị ime ya n'èzí na mpaghara nke ọma ị nwere ike ịnweta 1k nke ihe egwu ahụ ike dị obere karịa na-enweghị ihe ọ bụla na-echegbu onwe gị, mana maka longevi ty, 2k bu uzo iga ebe i no ebe a um anyi ga-egosi gi etu esi ese ihe, o gha enyere gi aka ima ihe ichere mgbe i na eji aerosol. Ọ gaghị abụ otu ihe ahụ mana ọ na-enye gị ezigbo echiche ee nke ahụ ga-adị mma biko enwebeghị mgbe m tinyere ihe ọ bụla ebe ahụ wee hụ tupu nke a bụ ihe na-atọ ụtọ iji zere anyị ịmalite primer na mpaghara anyị achọghị ikpuchi ya, anyị chọrọ ikpuchi ya ya mere na m nwere ụfọdụ masking teepu ebe a na m ga-gaba tube oche tube na ala mgbodo ma anyị nwere ụfọdụ bungs na ala mgbodo ma i nwere ike ikpuchi na ọ bụrụ na ị na-enweghị bungs otú mgbe ọ na-abịa na tingse okpokolo agba gị bụ ihe ịchọrọ iji egbe na ịgba agba mgbe ị rutere ya, akụkụ nke ị ga - ebu ụzọ wee pụta na njedebe belụsọ ma ị nwere ezigbo ihe na - akpalite nchịkwa nke dị oke siri ike na aerosol enwere ike ị ga - atụ aro na ị ga - abịa na njedebe ya ọ bụghị gị? Nweta agba dị ntakịrị, nke nwere ike ibute Arunas. Anyị na-arụ ọrụ na 2k primer taa m ga-atụ aro ka ị yikwasị ihe mkpuchi a.
O nwere ikuku ma o gha ewetara gi ikuku ohuru kama iku ume na uzuoku ma mee ka ihe ahu banye n'akpa ume gi. Snot ọ bụ mba m bidoro na-eme na ụfọdụ akwụkwọ ka m wee nwee mmetụta na ya, ugbu a ọ bụ oge maka ezigbo m ga-anwa ịkwaa my forks Ya mere nke a bụ igwe kwụ otu ebe m, ihe niile akwadoro ma dịkwa njikere maka ọkwa ọzọ, ana m ekele gị nke ukwuu na-enyere m aka taa ma jiri ya na nnukwu ihe omumu gị a nabatara gị nke ọma, nwee ndụmọdụ ndị ọzọ, nwee ndidi ee maa ndidi bụ nnukwu ihe ma mee nke ọma, n'ezie ee ee nke ahụ na-ekwe ha nkwa nke ukwuu maka ọdịmma maka agba ahụ daalụ ọtụtụ m ugbu a hapụrụ onwe m na m ga-amalite na mmiri sanding na etiti ahụ na 600 grit sandpaper ụfọdụ ọkụ soapy mmiri m ga-arụ ọrụ na dum etiti na ndụdụ wepụ ihe niile ezughị okè, ma ọ bụ na agbanyeghị mara mma zuru oke ma ọ bụrụ na ị don 'na-achọghị ime ihe ọ bụla crazy dị nnọọ ilekwasị anya na-eji ire ụtọ imecha ma ọ bụrụ na ọ bụ obere E nwere bumps si akọrọ primer, ju-elekwasị anya na ndị a, otú ahụ ka m kpamkpam sanded eku na dị ka ị pụrụ ịhụ na e nwere nnọọ ihe a obere nke agba ekpe on the frame so we need tohic that off so first I will just b b e mmiri na mmiri were Were ákwà ma hichapụ ya hichapụ ihe niile ma m ga-ehichapụ ya na primer a ka m wee dị ọcha karịa ma oge eruola maka ntọala Coatali enyela m akwụkwọ mmado ndị a na akwụkwọ mmado ndị a dị n'isi tube, ala mgbodo na oche na-anọ na brek aga calipers na ụfọdụ na ndụdụ naanị ịga ebe ọ bụla m na-achọghị ọ bụla agba otú niile akwụkwọ mmado nọ na ọ dị njikere maka nwa isi uwe na ọ bụrụ na ị iji aerosol di ka nke a di nkpa imikpu nkpuchi ka m nwee nkpuchi nke ugbua ebe a, um, mana mgbe m tinyere nkpuchi gi, igaghi enwe ike inurum ihe oburu ya ka m ga na-aga. chioma na olile anya na agaghi m eme ya ya ka basecoat mere, echere m na m mere ya ka o ju ya anya ma ugbua anyi bu j, a ga m ewere ya n'ime n'ihi na oyi na-atu n'èzí, ya mere a obere ekpomoku ka ọ dries, ya mere, mgbe ụnyaahụ mbụ nwa isi uwe m na-etinye na nke abụọ uwe ma weta ya n'ime nke e warm and over Ka ọ kpọnwụọ n'abalị ma ọ dị ezigbo mma Obi dị m ụtọ nke ukwuu taa ka m ga-eji ihe apre-paint hichaa ya, hichapụ ya ma m ga-arapara na stencil a nke becca ji obi ike kee. Enwere m dragọn abụọ nke welsh na myinitialsthat m ga-adịrị gị na m ga-arapara abụọ na ndụdụ ahụ wee abụọ na oche oche wee nwee ike iburu aha m na ala tube Amaghị m nke ọma na emebeghị m mara ma olile anya dị mma na nkeji oge ka ee ka anyị rute nke ahụ, akwụkwọ mmado m nọ ebe ahụ, azụrụ m ya n'ihu obere ụlọ m DIY agba ma ugbu a, ọ bụ oge maka ihe kacha mma na agba dị mma ma anyị ga-ahụ Oh chim lere ya anya mara mma oh Chukwu m huru ya n'anya mana nke a bụ kpọmkwem agba m chọrọ ka m wee tinye uwe mkpuchi abụọ na-ahụ site na Channel wee hapụ ya ka ọ kpoo ihe dị ka nkeji 20 ma ọ dị mma ugbu a maka aghụghọ ahụ Akụkụ nke ịnwa iwepu akwụkwọ mmado ahụ na-enweghị ibelata ma ọ bụ na-emebi osisi ahụ. Mkpịsị aka adịla mana agba ahụ kpọrọ nkụ ma ọ bụ oge ugbu a ma ọ bụ uwe ahụ doro anya na nke a bụ akụkụ kachasị sie ike, kwuru Umali ya mere enwere m olile anya na anaghị m agbagha nke ahụ mana enwere m obi ụtọ na ya, ọ dị oke mma ga-asị na ọ mara mma anya t yummy, ndị a bụ uwe atọ Emechara, m ga-ehicha ya n'ime ụlọ maka ihe dị ka awa 24 ugbu a ma ọ dị mma ebe a, aghaghị m ịgwa onwe m na mmalite nke ọrụ agba agba a, echetụbeghị m na m ga-eme ihe dị ka nke a mana nnukwu ekele ka Bex na Ali maka ịrapara na m. Enwere oku ekwentị ole na ole mgbe m na-ese ya n'onwe m iji chọpụta na m nwetara ya nke ọma mana ọ were ihe dị ka ụbọchị atọ mana nke ahụ bụ ụbọchị ọrụ zuru ezu ụbọchị atọ, enwere ọtụtụ na-eche eche na agba nkụ na iwere ọnụ niile aerosol na-efu m ihe dị ka £ 80, yabụ, ọ bụghị oke ọnụ ma ọ bụrụ na ị nwere etiti ochie dina m ga-atụ aro ịme obere agba agba na ya n'ihi na ọ bụ? ihe dị ezigbo ụtọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ndụmọdụ ụfọdụ n'aka ndị ọkachamara n'onwe ha, ọ bụghị site na onye na-amu amu a, gaa Bex na Alis youtubechannel dị ka igwe kwụ otu ebe m, biko nye isiokwu a nnukwu mkpịsị aka aka ma mee ka m mara na ngalaba ndị dị n'okpuru, ihe ị chere n'ime ya
Kedu ngwa igwe kwụ otu ebe dị mkpa?
9 Ga-enwerịrịBike Ngwamaka Kwa Anyịnya igwe
1) Okpu agha -Bike Ngwa. Ihengwa igwe kwụ otu ebena-eso bụ niiledị mkpa.
2) Na-agba ịnyịnya ígwè.
3) Ogologo Ogologo OgologoBike Ngwa.
4) Mmiri kalama ma ọ bụ Hydration Pack.
5) Multi-Ngwá ỌrụBike Ngwa.
6)Igwe kwụ otu ebeNfuli.
8)Igwe kwụ otu ebeMkpọchi.
Taa, achọrọ m igosi gị ihe anọ m chere ọ bụla onye nwe igwe kwụ otu ebe kwesịrị ịnwe. Ma ebu ụzọ gaa n’ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. (Joy of music) Thezọ igwe kwụ otu ebe dị obere snow.
Ọ dị mma, ịnabata ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe. Y’oburu na ohuru ebe a, ndewo, a bu m Arlee. Enwere m nwa agbọghọ Bike Shop, ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe na-elekwasị anya n'ezie n'inye ezinụlọ ike ka ha banye n'ụgbọala ma hapụ ụgbọ ala n'ụlọ.
Na ọwa a na ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe m, ebum n’uche m bụ inyere ndị mmadụ aka ịhapụ ụgbọala ha n’ụlọ. Ọwa ahụ nwere ndụmọdụ, nyocha, naanị ihe ntụzịaka niile ka esi aga ahịa ahịa, otu ị ga-esi lanarị nnara ụlọ akwụkwọ ma jiri igwe kwụ otu ebe pụọ. Na azụmahịa m, m na-elekwasị anya na igwe kwụ otu ebe, ụmụaka ụmụaka na igwe eletrik.
Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ nke ọ bụla n’ime ihe ndị a, jide n’aka na ị ga-eleba anya na weebụsaịtị ndị a, enwere m olileanya na m ga-enweta obere okwu isi okwu site na ịgagharị ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe m dịka ị batara n’ụlọ ahịa wee jụọ m ajụjụ. Ya mere, taa, m ga-agwa di na nwunye okwu site na Fraịde n'ezie ha na ha ga-enweta ịnyịnya ígwè ọhụrụ ma ha chọrọ ịma ihe ha chọrọ? Ha nwetara igwe kwụ otu ebe n’obodo, ọkachasị ndị enyi abụọ a. N’ihi ya, ọ na-amasị m ịgwa ndị mmadụ, malite n’ihe ị maara, nke ahụ bụ ọkwa mbụ, n’agbanyeghi ihe ọ bụla, n’ebe ahụ ka m na-amalite ndị mmadụ.
Ma mgbe ahụ ị ga - ebu ụzọ mee njem mbụ ị na - asị, hey, achọrọ m ị coffeeụ kọfị ka anyị tinye mkpọchi. Ma ọ bụ, hey, m mere ogologo ịnyịnya ígwè, mgbe ahụ, anyị ga-ekwu maka ihe ndị metụtara okporo ámá. Ma taa, achọrọ m ịmalite site na isi ihe ọ bụla onye ọ bụla nwe ịnyịnya ígwè chọrọ.
N’ihi ya, m ga-akpọrọ gị ka m gagharịa n’ụlọ ahịa ahụ dị ka à ga-asị na ị nọ n’ụlọ ahịa m. Ihe mbụ ị chọrọ bụ okpu agha. Na okpu agha malite na $ 45 ruo, Echere m na m zụtara okpu maka $ 350,400.
Nke a bụ ihe, M ga-egosi gị ọkacha mmasị m kwa ụbọchị igwe kwụ otu ebe na ọtụtụ di na nwunye na ụzọ kpọmkwem okpu agha na iche. Okpu agha m kachasị amasị m maka ndị mmadụ n'ozuzu ha na-amaghị ihe ị ga-eme igwe kwụ otu ebe bụ ihe dị ka nke a, nke a bụ Kali Chakra Solo, ọ nwere visor na-ewepụ ewepụ, obere cog dị mma n'azụ iji dozie ihe dabara gị , ọ na-abịa na di na nwunye dị iche iche nha dị, $ 45 nri? Ezi ikuku, ọ bụghị ihe ijuanya na ọ siri ike. Tinye ihe a ma ọ dị ka okpu agha 60, $ 70 site na ụdị ọzọ.
You nwere ike ịnweta okpu igwe igwe igwe na-ahụkarị maka otu ọnụahịa ahụ, yabụ nke a bụ okpu agha Lazer gị, ebe a okpu agha gị na-amasị m Lazer Next n'ihi na maka $ 45 nke visor ahụ na-apụ, ezigbo ikuku, ọ bụghị ikuku kacha mma. Yabụ ọ bụrụ na ịsụsọ ọsọsọ nke a abụghị ụdị okpu agha m na-akwado. Omume dị mma na azụ.
Offọdụ n'ime ha nwere ike idozi ya na Velcro ma ọ bụ pads nke mere na nke a nwere ọnọdụ mara mma. Nke a bụ ọkụ, ọ bụ batrị bọtịnụ. Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ụmụaka na-eto eto buru nke a tụfuo, mana ọ nwere ọkụ mara oke mma.
Nke a bụ okpu agha ọhụrụ si Kali, echere m na ọ pụtara n'afọ gara aga, Danu. Kinda na-ele anya otu ihe, aka nri, mana ikuku ikuku. Ihe nlere a na-ewepu, dị mfe ịgbanwe na azụ, mana ị ga - eburu okpu a, ọ bụ nzuzu nzuzu Yabụ ọ nwere nke a magnetik magnetik fidlock ụdị agbatị, enwere m ike imeghe ma mechie ya na otu aka, dị ka Kali Danu n'ihi na obodo ahụ anya ma na ventilashion, $ 60, M n'ezie na-amasị a okpu agha.
Ya mere ana m arịgo n'ọrịrị ọnụ ahịa, enwere ọtụtụ okpu agha ndị ọzọ m na-eyighị, ana m elekwasị anya na ịgba ịnyịnya ígwè obodo na ọ bụ ya mere m ji eyi Ihe m na-eme, yabụ onye ọzọ bụ Kali Central, nke a bụ okpu agha m ' m Kali maka ezigbo ikuku ikuku, ọ na-arụ ọrụ nke ọma dịka okpu agha, ọ nwere ọkụ na azụ, ọkụ 2020 a na-agbanye ọkụ, nwere otu eriri ị hụrụ ugbu a na okpu agha ọzọ. $ 80 na ọ bụ ya mere ìhè ị ga-ewere ya iji kwere ya. Igwe ikpeazụ m na-eyi n’ụdị obodo a bụ Kali City.
Ọ bụrụ na ị soro m na mgbasa ozi mgbasa ozi, ị hụla okpu agha a. O nwere ezigbo visor dị jụụ, yabụ visor ahụ si na okpu agha ahụ pụta, na-abata na ntụpọ ahụ ma ọ bụ anwụrụ ọkụ zuru oke wee chekwaa ya. Achọrọ m nke ahụ maka eBike na-agba ịnyịnya mgbe ọ dị obere oyi n'ihi na enweghị oghere ọ bụla ebe a, kedu mara ezigbo mma.
Mgbe nile nkechi, o nwere ndị ntị flaps na snap na na anya mgbe ị na-aga oyi ụgbọala. Ka anyị hụ, mgbe ahụ anyị nwere okpu agha a na-eji igwe kwụ otu ebe malite na $ 100-200, mkpuchi ndị ọzọ, ndị na-aga ogologo oge, ụfọdụ n'ime ha nwere ugwu GoPro. Okpu agha nke okporo ụzọ na-amalite na $ 90, gbagoo $ 250, nzuzu dị nzuzu, ọtụtụ spandex nke ikuku, nke ahụ bụ okpu agha mbụ anyị, yana dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ebe zuru oke, aga m akwụ 45 ruo 100 € maka Otu Atụmatụ maka okpu agha dị mma, nke nwere ntụsara ahụ yana ụfọdụ atụmatụ, nke dị mma nke ukwuu.
Number abụọ, a n'ala mgbapụta. Ha sitere na 20 ruo nke m na-eji n’ụlọ ahịa ahụ bụ $ 200. Ebe m na-aga bụ JoeBlow Sport 2.
Ana m eji ya dị ka onye na-eme njem, na afọ asatọ nke ọrụ nke a na-eji ọtụtụ, agbanweela m isi. Nke mbụ, nweta mgbapụta n’ala. Ọ bụrụ na ị na-anya ụgbọala atọ, ugboro anọ n’izu, ị ga-ekupụta taya gị otu ugboro n’izu, ị chọkwara mgbapụta na-arụ ọrụ ọ naghị arụ iwe iwe, ọ fọrọ nke nta ka m bụrụ ọnụ.
Ọ bụrụ n’ikpebie na ị ga - amalite ịpụ, mee njem ndị ọzọ, nwee ọfụma ma bido na - agbanwe taya gị, ka anyị bido ileba anya na mpempe akwụkwọ dị larịị nke m anaghị atụ aro maka ihe anọ mbụ gị bụ onye ịzụrụ. Ugbu a, anyị ga-ekwu maka iyi ihe gị. Ka anyị kwuo maka isi, ka anyị gaa E nwere ihe dịka ịkwa akwa nke na-aga n'okpuru sadulu.
Enwere igbe bento dabara n'etiti etiti na ọkpọkọ tube. Enwere obere akpa nke ọkacha mmasị m. Ka anyị gosi gị ka ha si arụ ọrụ.
Nke a bụ ọtụtụ nke anyị kwa ụbọchị anyịnya igwe. na m n'ezie na-eji ya maka m snacks na ọduọ anyịnya igwe n'ihi na anyị enweghị ike ezuru snacks. Mana abụ m nnukwu onye na-achọ ịpụ naanị ihe n’ime akpa m tinye ha n’ịnyịnya igwe n’ihi na gịnị kpatara ị chọrọ iji buru nke gị? Ihe gbara gburugburu? Ya mere, anyị mere okpu agha, anyị mere mgbapụta, anyị buuru ihe gị na, nke ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, ọkụ.
Yabụ na ụlọ ọrụ igwe kwụ otu ebe anyị na-agbaji ọkụ ọnụ, iji hụ ma ọ bụ ịhụ. Iji lee anya, ntabi anya dị mfe dịka $ 20 n'ihu na azụ. Inghụ ihe ga-adị ka $ 40 na $ 70, ma ọtụtụ n'ime ya ga-akwụ ụgwọ site na USB, gịnị bụ? Ofdị mara mma.
Ya mere, ka anyị gosi gị ọkụ m na-eji ma na-ere, yabụ Planet Bike Lights gafere ebe a, ga-abụ ihe m na-ere nye ọtụtụ mmadụ maka ọnọdụ 'a hụrụ'. pitch nwa, ị chọrọ achọghị ka a gafere gị. Na m na-akwọ ha mgbe niile.
Ọkụ m na-adị ehihie na abalị n’ihi na achọrọ m ịhụ tupu ọkwọ ụgbọala adọpụ uche ya, ma ọ bụ achọrọ m ịdọrọ uche ha site n’ìhè na-enwu gbaa, na e nwere ndị na-agba ọsọ ụbọchị ugbu a na ihe ndị a niile, ma ihe m kwuru taa bụ dị mfe na-enwu ọkụ gị oge niile Mgbe ahụ anyị ga-arịgo elu iji hụ na nke ahụ niile ga-abụ ụgwọ USB na batrị lithium na-achọ 35-65 maka ezigbo setịpụrụ nke ị ga-ahụ n'ọchịchịrị iji mee ezigbo clip. Chọrọ ka ọkụ na-enwu gbaa ngwa ngwa ị na-aga n'ihi na ị ga-agabiga ọkụ gị, ya bụ, ị gaghị ahụ ụzọ nke ọma, n'ihi na ị na-anya ngwa ngwa ị nweghị oge ị ga-eme. Ya mere, anyị chọrọ ìhè na-enwu gbaa dabere na ọsọ ị na-agba.
Ebe obu na m no ebe a, a na m atunye obere nkpuru nihi na ahuru m onye a n’anya nke ukwuu. Ihe ọkụkụ ụkwụ ụkwụ bụ ihe m ugbu a. Ndị a na-eme visibiliti n'akụkụ, na-enwusi ike, na-adọta uche ndị mmadụ, a hụrụ m ha n'anya ọkụ N204, ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya n'abalị tinye ọkụ ọkụ na igwe gị, anaghị atụ aro ma ọ bụ kwụọ ha ụgwọ, naanị m hụrụ ha n'anya. Ekwu okwu isiokwu? Obere ihe mgbochi ndị a mere ka anyị ghara ịgba ịnyịnya ígwè anyị ọtụtụ mgbe, na-awụli elu anyịnya igwe iji banye ọrụ, kọfị na na njedebe nke ụbọchị, dị ka ị maara, ihe mgbaru ọsọ m bụ ime ka ị nwee ike ịbanye igwe gị ma hapụ ụgbọ ala n'ụlọ.
Ruo oge ọzọ, nke a bụ Arlee na Girl Bike Shop Girl. Daalụ maka ileta ụlọ ahịa ahụ. (egwu na-ada ụda)
Enwere m ike ịgbanwe igwe kwụ otu ebe m?
1) Iheagbanke gịigwe kwụ otu ebe nwere ike-gbanwe dị ka Supremelọikpe Kasị Elu kwuru kpọmkwem nana-agbanweiheagbanke ugbo ala a na RTO akwadorona agbaa ga-ekwe. Nke a pụtara na ịnwere ikema kechie gịigwe kwụ otu ebema ọ bụmeea omenala agba ọrụ dị ka ogologo dị ka ị na-tupu ikike si obodo RTO kameeya mere.04/16/2021
Ugboro ole ka m kwesiri iji igwe eletriki igwe m?
IgweTutor na-atụ aro ihicha na mmanu gịigwe kwụ otu ebeụgbọalayinyeọ dịkarịa ala otu ugboro kwa ọnwa iji nọgide na-enwe ezigbo arụmọrụ na nchedo. Iheyinyena drivetrain bụ Elezie ndị dirtiest akụkụ nke gịigwe kwụ otu ebe, na unyi a bụ akụkọ ọjọọ makaigwe kwụ otu ebeogologo ndụ na arụmọrụ.Mar 21 2019
Izu a bụ ihe mmezi pụrụ iche-themed episode. Nwere ike ịmata mgbe anyị kwagara ebe ọzọ yana site n’eziokwu na m na-eyi ihe mkpuchi.
ọbara mgbali elu maka ụmụ nwanyị
Oh ee, nke ahụ pụtara na ọ bụ oge azụmahịa, nke ahụ ga-adị egwu. Ọ dị mma, ihe mbụ anyị nwetara bụ ajụjụ Andrew Reitsma jụrụ banyere mmanu mmanu, yabụ ọ sịrị 'hello si ala n'okpuru'. 'Nnọọ.' Ugboro ole ka o kwesịrị ịbụ na kilomita ị ga-agagharịrị agbụ 'na akọrọ ihu igwe? O kwesiri igbari ya oge obula tupu igha? Chei, nke a bu ikpuru zuru oke iji bido ihe.
Ọtụtụ ndị mmadụ nwere nkwenye siri ike na ha kwesịrị ilekọta agbụ ha, yana nke a bụ akụkụ dị mkpa nke igwe kwụ otu ebe. Mana echere m na ọ ga-ekwe omume ịmegharị ihe. Ọ bụrụ n’ịgbalị ịnweta ndụ narị kilomita ole na ole site na agbụ gị, ọ nwere ike ọ gaghị aba uru na-atụgharị uche.
Mana enwere ike ime na emeghi ihe. Ọ na-abụkarị na m ga-asị relubricate gị yinye mgbe ọ na-akpọ nkụ ma na-eme mkpọtụ, mana ma agaghị m emekpa ahụ. Ma mgbe ahụ, na okwu nke degreasing, m ga-ele anya dị ka na Chain na njikọ bụ, ya mere, n'etiti rollers.
Maka n ’ebe ahụ ka a nọchiri anya otu agbụ, mgbe juputara na aja na aja na ihe ndị ọzọ, ọ bụ ebe ahụ ka ị ga - ehicha ya rue mgbe ọ ga - enwu dị ka ọhụụ. O doro anya na ị ga-eche maka ụdị degreaser ị na - eji - anaghị eji abrasive, acidic ma ọ bụ alkaline solvents a) Mgbe ahụ nke a adịghị mma maka ndụ nke igwe gị. Ọtụtụ ndị nrụpụta ga - asị na ị ga - ala azụ.
Mana igwe kwụ otu bekee na –eme ka ọ rụọ ọrụ nke ọma kwa oge. Mana enweghị iwu maka na njedebe nke ụbọchị ebe ị na-anya ụgbọala nwere ike ịdị iche karịa ebe m na-anya ụgbọala n'ọnọdụ akọrọ. Ma ịmara, dịka m kwuru, ọ gaghị ekwe omume ịnye ọnụ ọgụgụ ziri ezi, mana olile anya na-enyere aka na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a.
Yabụ, na-esote, anyị nwetara nke a site na TomKrouze. Aha dị jụụ, Tom. 'Gịnị bụ n'ezie uru ma ọ bụ ịdị mkpa nke isi ike' n'ịnyịnya ígwè? Kedu mgbe, gịnị kpatara, achọrọ m igwe kwụ otu ebe? ”Ọfọn, nke ahụ bụ n'ezie ezigbo ajụjụ.
Ndị mmadụ na-echekarị na igwe kwụ otu ebe dị mkpa maka nnyefe ike, yabụ na ị na-agbanye cranks yana ike niile na-aga na wiil azụ n'ihi na igwe kwụ otu ebe anaghị agbanwe agbanwe. Otú ọ dị, nke a na-eleghara isi ihe dị mkpa anya bụ na n'ozuzu ọ dịghị ume na-efu na usoro ihe a. O doro anya na ike agaghị efu, a na-ebufe ya ebe ọzọ.
Ya mere, na usoro iwu, ọ bụrụ na igwe kwụ otu ebe gị na-agbanwe, nke a agaghị enye gị ike ahụ n'ụzọ ụfọdụ. Ya mere, nke ahụ bụ isi otu m chere. Ma stiifes anyịnya igwe na-na-eche ka mma na okwu nke ike nnyefe.
Ma n'ezie m na-eche stiifes anyịnya igwe n'ezie nye na usoro nke njikwa. Ya mere, echere m na nkwụsị ihu siri ike na igwe kwụ otu ebe bụ ezigbo ihe iji mee ka igwe kwụ otu ebe nwee nnukwu mgbe ị na-agbagharị. Ma ọ bụ n'ezie adịghị mkpa.
Nwere ike ịga ọsọ ọsọ ọsọ na igwe kwụ otu ebe na-agbanwe agbanwe. Dịkwa mma, na-esote anyị nwere nke Haziq Annie, 'Enwere ike ịgbanwere mgbatị ala?' Nwere ike 24 mil crankshaft dabara 'n'ime a BB30 na a di na nwunye nke nkwụnye?' Ee ọ nwere ike. Actually nwere otu ebe a echere m.
Bịanụ. Yabụ, FSA na-eme obere nkwụnye. Nke a na - esi na BB386EVO bracket, oreah, ọ ga - agbadata, nke a bụ maka Srams GXP, yabụ na nke a bụ 20 mil spindle m chere. (22mm & 24mm) Were a anya online, nkwụnye bụ n'ezie dị, ma ọ bụghị ihe niile na ala brackets nwere ike bụ na-emegharị niile crank ụdị.
Ya mere, gaa n'ihu nke ọma. Mana, ee, ị nwere ike ime ihe ọ bụla. Ọ dị mma, na-esote, nke a sitere n'aka Patrick Joseph. 'Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ahịa igwe kwụ otu ebe na-agwa gị ka ị waghachị igwe kwụ otu ebe ọhụrụ gị ka izu ole na ole gachara iji kwụghachi gị,' ọ bụ naanị ihe ngọpụ iji ree gị ọtụtụ ihe? “Ee e, ọ bụghị eziokwu.
Cable, ka anyị kwuo na ha agbatị, eriri ndị ahụ anaghị agbatị, mana okwu ahụ niile na ihe nwere ike gbatuo ma nke ahụ nwere ike ịtọpụ gị obere ntakịrị nke bụ n'ezie ihe ị ga-eme n'ụlọ. Anyị nwere nnukwu edemede n’isiokwu a. Ma n'ezie anyị na-egwu ntakịrị n'ime ya ugbu a.
Ọfọn, ọ bụrụ na azụ azụ gị adịghị n'okpuru ya, gbanwee Cogin mgbe ị gbanwere gia, mgbe ahụ a gaghị edepụta gia ahụ. Kedu ihe na ebe ọ bụla, mgbe ahụ ebe ha dara. Ma ọ bụ usoro ntinye aka iji dozie nke ahụ ma mee ka onye na-ere ahịa na ebe.
Can nwere ike Micro-ịgbanwe ya nnọọ mfe. Ọ dị mma, anyị nwere ezigbo ajụjụ ọzọ dị mma n'okpuru akwụkwọ akụkọ youtube gara aga, nke a si leecbracing, ma ọ bụ ịgba ọsọ cb, na-ejighị n'aka. N'ọnọdụ ọ bụla, ha jụrụ, sị: 'Gịnị mere ndị ọkachamara ji anọdụ ala n'ihu?' Ọ bụ n'ihi na ọ bụrụ na ị ga-ewe oke iwe na oke ọsọ ọsọ n'okporo ụzọ dị larịị, n'ezie ịchọrọ ịmakwu.
Ma mgbe ị matara nke ọma, ọ pụtara na hips gị na-agbagọ n'ihu, ya mere, iji wee nwee ahụ iru ala ma nweta ume, ị ga-achọkwa ịga n'ihu. Ọ bụghị ihe ọhụrụ. Ọ dịla ogologo oge na ọ bụ ya kpatara anyị ji enwe ikpe na ihe ọjọọ.
Kedu nke bụụrụ gị ntakịrị ntakịrị banyere ịgba ịnyịnya ígwè, ọ na-abịa site n'oge mgbe a na-agba ịnyịnya mmiri na ndị mmadụ na oche ahụ na-aga n'ihu ma na-anọdụ ala na rivet n'ihu ebe ahụ, ihe dị ọhụrụ ugbu a bụ eziokwu na ọnọdụ ndị ahụ na-abawanye ma ọzọ elongated na n'ihu nke mere na sadulu na-aga n'ihu n'ihu ma na-achọkwa ala. Ma Matt nwere ezigbo ezigbo ederede na njem nlegharị anya nke Dubai na nso nso a, ọ bara uru ịmụtakwu ihe - a maara uru ndị ahụ maka ọnọdụ ọgba aghara ha siri ike, mana n'oge na-adịbeghị anya, omume na-arịwanye elu na-emebiga ihe ókè. (ụda dị nro) Ọfọn, ọ bụrụ na ị na-eche banyere nke ahụ, igwe kwụ otu ebe m siri ike, na m na-ekwu na enwere nnukwu ọdịiche dị n'etiti aka na aka ya, dị ka agbụrụ m ma jiri ya tụnyere ọnọdụ ike Johann van Zyl i ga-amarakwa ihe m bu n’obi.
Ugbu a, anyị esorola ndị ọkwọ ụgbọ ala ole na ole kparịta ihe mere ha jiri wee na-emebiga ihe ókè. - Ọ dị mma, ajụjụ na azịza oge ugbu a. Mgbe niile nwere ike ịbụ akụkụ kachasị nwayọ nke isiokwu ahụ dum, mana dịka ThatsSoNathan kwuru n'izu gara aga, 'Nkọwapụta Nkezi' adịghị mkpa n'oge ọkụ ọkụ Q&A. 'Ya mere, daalụ maka nke ahụ, Nathan.
Ajuju nke mbu, Liam Bradley. Ee, o nwere nsogbu na ụkwụ azụ ya. Mgbe ụfọdụ ọ na-arụ ọrụ nke ọma ka ọ pedal. 'ma ọ na-aga n'ihu.
Mgbe ụfọdụ aka ụkwụ aka na-agbagharị ma ọ nweghị ihe ọ bụla na-eme, gịnị dị njọ? Ọfọn, nke ahụ bụ mkpesa a na-ahụkarị mgbe ụkwụ gị n'azụ na-aka nká ma ọ bụ freewheel na ọ na - enye gị ohere ịghara ịpịgharị na mpịakọta ma jiri ụkwụ kwa. N'ụzọ bụ isi, ha nwere ike ịdakwasị ntakịrị na gunkand na ihe nzuzu n'ofe oge wee bụrụ obere mkpụrụ osisi na-eme ka ị kwụsị ịkwụsị ịwụ elu na ị nwere ike idozi ya, yabụ na ị ga-anọrịrị na weebụsaịtị lelee onye nrụpụta gị ntuziaka. Agbanyeghị, enwere ohere ka freewheel gị agaghị enwe ike idozi ya wee nwee ike ịmachi.
Ya mere, kpachara anya na ịlele ntanetị n'ịntanetị. Imirikiti freewheels anyị nwere ebe a na GCN-Bikes, echere m na enwere ike idozi ha. Yabụ na ị nwere ihu ọma.
Eji m n’aka na ọ ga-abụ gị. Okay we now have one of oreosaysb00 nke bụ a iju aha. 'Gịnị kpatara ndị ọkachamara jiri jiri taya 25c na-agba ịnyịnya mgbe ị na-echekwa elekere abụọ ruo atọ na wiil ọ bụla nwere taya 28c?' Ọ dị mma, mmadụ nwere ike ịza nke ọma: Lennart Meinke, onye kwuru, sị: 'Ọ bụ obere ikuku na ọtụtụ ọdịnala. “Aga m agwa gị, nke ahụ abụghị eziokwu.
Mgbe ụfọdụ ọ na - ewe oge maka echiche sayensị iji banye na Pro Peloton. Maka na njedebe nke ụbọchị, otu ihe si ele na ihe ndị mmadụ na-eche dịkwa oke mkpa. Na ọtụtụ uru kwenyere na 28s dị nwayọ karịa 25s, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na data ahụ nwere ike ịsị na ọ bụghị.
Otú ọ dị, 28s dị ntakịrị karịa 25s na obere ikuku. O doro anya na e nwere ebe ọzọ ị ga-agbaji site na ifufe. Mana echere m na anyị ga-ahụ uru ị ga-eji karịa 28s, ọkachasị ly ka wiil ndị ahụ na-abawanye.
N’ụzọ doro anya, nke a na-ebelata ụfọdụ ndozi aerodynamic. Ọfọn, na-esote na anyị nwere ajụjụ si Amaury ebe a bụ onye kwuru na ya ka nwere Canyon Aeroad ọhụrụ maka ịgba ọsọ ọsọ Mee ngwa ngwa, gịnị ka ị kwadoro maka oke taya, 25 ma ọ bụ 28 mil, Continental GP 4000sII? Ọfọn, nyere ihe m kwuru, 28s ga-adaba na nkasi obi ma ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya na-adịghị mma, tarmac abrasive na 50 psi ebe ahụ igwe kwụ otu ebe ga-agbagharị dị ka kapepe anwansi ma ị ga-aga ngwa ngwa. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-akwọ ụgbọala na ezigbo ezigbo korota na aerodynamics bụ ihe niile na nkezi ọsọ gị dị oke elu, ị nwere ike ịga 25c, mana m ga-eso 28con gaa, nke ahụ bụ n'ezie.
Ọ dị mma, ya mere, anyị nwere ọtụtụ ajụjụ kwa, ha niile nwere njikọ. O di nwute, Dan Azụ agbajiela ọkpụkpụ olu ya ma chọọ ịma otú ọ ga-esi jiri Turbo Trainer mee ka ahụike ya dị na ya mgbe ọ ka nwere oge mgbagha. Yabụ ya na onye na-enye turbo na ị gaghị anọ ogologo oge n'ime ya.
Lelee ebe nchekwa GCN, usoro ọzụzụ. Ma ọ bụrụ na ị mere ma eleghị anya, otu n’ime nkeji iri abụọ ma ọ bụ iri atọ anyị kwa ụbọchị, ikekwe ị ga-ahụ na ị nọ n’ezi. Ọ dị ịtụnanya na ntakịrị ihe ị ga-eme iji dịrị mma, ọbụlagodi na ọ na-esiri gị ike ịnweta onwe gị.
Stephen Cummings meriri British National Road Race Champs na British National Time Trial Champs na ngwụsị izu mgbe ọ na-enweghị ọgbọ na-akwọ ụgbọala karịa n'ihi na ọ kwadoro mmerụ ahụ dị njọ mgbe ọ daba na njem nke Basque Country. O mere ọzụzụ ya niile na Zwift ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Nationals, n'ezie. Gụnyere ụfọdụ mara mma punchy agafe na awa anọ gbakwunyere.
Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ma ọ bụ na ịnweghị nhọrọ ahụ na onye na - azụ gị onye mara ihe, ihe niile ị chọrọ bụ ihe mmetụta ole na ole, yabụ na Zwift nwere ike ịbụ azịza gị site na olu agbaji agbaji dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara na - eme ugbu a. Njikọ dị ọcha na ajụjụ ọzọ nke Sanresh Shedekar zitere bụ onye kwuru na FTP ya n'okporo ụzọ bụ 245 watts mana na Zwift FTP ya dara na 205 watts, ọ na-ata ahụhụ nke ukwuu, anyị nwere ike ịgwa ya ihe kpatara ya? Nso ke enye akpanam? Ọ dị mma, enwere ọtụtụ ihe kpatara FTP gị ji dị ntakịrị n'ozuzu ya, mana otu n'ime nnukwu ihe bụ n'ezie ọkụ n'ihi na ahụ anyị anaghị eme nke ahụ mgbe ị na-ekpo oke ọkụ ma na-enweghị mmetụta jụrụ oyi nke ifufe ọbụlagodi na otu n'ezie ezigbo onye ofufe n’ihu gị, ị ga-ahụ na ftp gị nwere ike iyi obere obere. Ya mere, ọ bụ ya mere.
Nwere ike ịnwale ọzụzụ na ebe ntụ oyi, yana ndị ọzọ Fans, nke a ga-enyere aka, mana ọ bụrụhaala na ị na-azụ ma nwalee onwe gị n'otu gburugburu. Yabụ ọ bụrụ na ị na-anwale ya mgbe ọ bụla na mpụga ma ọ bụ mgbe ọ bụla n'ime, mgbe ahụ, ọ bụghị nsogbu ọ bụrụ na ọ dị mgbe 35 watts dị ala n'ime. Ọ bụ naanị na ị maara na ọ bụ n'ihi na ị na-ekpo ọkụ na ị nwere ike ịhapụ ya na nke ahụ, mana ajụjụ jikọtara ikpeazụ, ị dịla njikere maka nke a? Ọ dị mma B.
Ryder na-ekwu, 'Anyị anụla banyere ọzụzụ elu,' enwere ihe dịka ọzụzụ ọkụ? 'Ee, enwere. Ee, ị nwere ike imega ahụ iji nweta ahụ ike na okpomoku. Yabụ ọ bụrụ na ị bi na ime obodo oyi na mmiri oyi, dịka ọmụmaatụ, mana ị na-azụ maka ihe omume a na-eme na obodo mara mma, nke na-ekpo ọkụ, nke anwụ na-acha, nke a ga-abụ ezigbo ezigbo echiche iji nweta ọkụ ọkụ tupu ị gawa.
Ikwesighi ime oke. Yabụ mgbe m na-agba ọsọ, agwara m ka m mee mgbatị turbo, ọ bụghị nke siri ike, naanị ịkwọ ụgbọala, kama n'ime ụlọ dị ọkụ, mmiri mmiri. Ikekwe ọbụna ime ụlọ ịwụ gị.
Echere m na Matt mere ya otu ugboala. Ọ bụrụhaala na ị na-arụ ọrụ ọsụsọ, mee nke a maka otu awa kwa ụbọchị, ụbọchị ise kwa ụbọchị tupu ị gaa njem, nke a kwesịrị ime ka ị nwee ahụ ọkụ. Gaa n'ihu, ọzụzụ ikpo ọkụ.
Ziri ezi. Olee otú nke ahụ bụ maka Quickfire mgbe ahụ? Eleghị anya ọ bụghị ngwa ngwa ahụ, mana enwere olile anya na azịza ajụjụ ndị ahụ zara. Echere m na nke ahụ bụ isi.
Anyị nwere ike mgbe niile nyegharịa ya, na-akpọ ya dị iche iche. Ọzọ, anyị nwere ajụjụ si n'aka Gabriel Blanchfield. Ọ na-nwetara a iche creak na Mpaghara nke ya crankset, e nweghị anya mmebi, na wheel na-ọma nọgidere na-enwe na ọ na-adị mgbe ọ bụ na nnukwu mgbanaka.
Enwere m obi ọmịiko n'ihi na ịchọpụta wiil na-ada ada nwere ike bụrụ usoro na-akụda mmụọ. N’ụzọ dị mma, igwe kwụ ọtọ Lasty kwụ n’akụkụ m. Ya mere, ọ bụrụ na ọ na-ada ụda mgbe ị nọ na mgbanaka buru ibu, mgbe ahụ, ọ nwere ike ịbụ n'ihi na ị na-etinyekwu ihe mgbochi site na igwe kwụ otu ebe ma ya mere ọ na-ada.
O nwekwara ike ịbụ ihe mkpuchi gị, yabụ m ga-atụ aro ka ị lelee ihe ndị a, gbaa mbọ hụ na ha niile emeela ka ọ sie ike. Ọ bụ ezie na ha anaghị eme mkpọtụ, ha na-eme ka ịpị dị ka ha si eme. Ọ nwere ike ịbụ nkwado gị, mana tupu ị gbadaa n'okporo ụzọ a wee gafee ụzọ, m ga-atụ aro ka ị lelee ihe anyị nwere banyere ịdebanye na igwe gị. Anyị mechara mee anọ ọzọ na ederede, n’ihi na enwere ọtụtụ permutations dị iche iche.
Dịka ọmụmaatụ, enwere m creak nke mere. Ekwenyesiri m ike na ọ na-abịa na m cranksets na oge ọ bụla m si n'elu sadulu na ọ tụgharịrị na ọ bụ m n'ihu ọsọ ọsọ ntọhapụ. Agaghị m egwu gị, mana ka anyị gawa.
Ọ dịkarịrị mfe iji karịa ihe nkwado ala. Ka o sina dị, isiokwu ahụ na-egwu ugbu a, lelee ya. Ịpị, igwe kwụ otu ebe na-akpasu iwe nke ukwuu, esand nwekwara ike mebie njem gị.
Enweghị igwe kwụ otu ebe na-enweghị ọnụ, ọbụnadị n'elu ugwu kachasị elu na-adịghị ike. Ugbu a, na mgbakwunye na imebi njem gị, ọ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke ihe dị oke njọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe carbon mebiri emebi ma na-achọ ịda, ọ nwere ike ịmepụta nnukwu ọkụ.
Yabụ na ọ dị mma mgbe niile ị paya ntị na mkpọtụ ahụ, ọbụlagodi na ịnwere ike ịnagide mkpọtụ ahụ. Random Bike Trips jụrụ ezigbo ajụjụ dị mma n'okpuru ihe ngosi izu gara aga. 'Gịnị bụ ezigbo ọnọdụ ma ọ bụ akuku iji hazie njikwa gị? You na-ahụ ụfọdụ? nke nwere ntakịrị mkpọda, ụfọdụ na-ehulata ala. 'Ọfọn, ọtụtụ dabere na ọdịdị nke njikwa gị, kamakwa na mmasị onwe gị.
N'ezie, ọ nwere ike ịgbanwe ka oge na-aga. Ọ nwere nke m. On Lasty si igwe kwụ otu ebe ebe e nwere ike njikwa na azuokokoosisi.
Yabụ na ọ nweghị nhọrọ ma ị nwere ike ịhụ na Trek kpebiri na nke a bụ akụkụ kachasị mma. Ma n'ezie m ga-eme nke ahụ kwa. Ihe abụọ ị nwere ike ịlele.
Nke mbu, akuku aka nke n’akuku nkpuchi breeki gi. Yabụ, ị na-enwe mmasị na ya mgbe ọ na-agbada ka ọ bụ na-amasị gị mgbanwe na-agbanwe agbanwe? Imirikiti ndị mmadụ na-enwekarị mgbanwe ịga nke ọma. Ihe ọzọ bụ, ị nwere ike iji nkasi obi jide tụlee? na a ga-enwerịrị nkuku ga-adaba na nkwojiaka gi.
Yabụ, na mkpokọta, ịchọghị ịgbagọ aka gị ka ọ ga-adị iru ala ruo ogologo oge. Ma ọ bụ elu ma ọ bụ ala, ụdị dị ka nke ahụ. Na mkpokọta, ịchọrọ ka nkwojiaka gị nọrọ n'ọnọdụ na-anọpụ iche wee nwee ọfụma ka ị na-apụ site na aka anyị gaa igwe mkpuchi gị.
Anyị nwere otu isiokwu n’isiokwu a n’enwe olileanya inye gị ụfọdụ ozi. Aga m anwale ya maka gị ugbu a. Isi okwu mbụ anyị ga-ekpuchi bụ obosara aka.
Ọfọn, a na-ahụkarị okporo ụzọ na nha sitere na 38 ruo 46 sentimita asatọ n'obosara. Dịka, ị ga-ahọrọ aka gị dabere na ogo gị. Ewezuga na ịdị elu anaghị eme ya n'ezie, ọ bụ n'ezie obosara ubu gị.
Ogwe aka ahụ bụ otu obosara dị ka ebe dị anya n'etiti nkwonkwo AC gị. Ndị ahụ bụ gnarled ibe n'ibe gị n'ubu. Yabụ mgbe ị debere mkpịsị aka gị na tụlee, nkwonkwo ụkwụ gị dị n'èzí n'ubu ubu.
Azala m ajuju gi. N'ezie, ọ bụrụ na enwetabeghị m ịza ajụjụ gị n'izu a, gbaa mbọ hụ na ị tinyere ya na ngalaba ndị dị n'okpuru ebe a. Ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọhụrụ ma ọ bụ ihe ọhụụ na ngosi ahụ wee nyefee ajụjụ gị na ngalaba nke dị n'okpuru ma ọ bụ na mgbasa ozi mmekọrịta na # TorqueBack.
Ugbu a tupu ịhapụ edemede a, jide n'aka na ịdenye aha na GCN. Ọ dị mfe, pịa ụwa naanị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ị nweta ọdịnaya ugbu a wee pịa ya maka ngosi ngosi ngosi nke de de France, nyere na ọ ga-amalite echi, ma ọ bụ ikekwe ọbụlagodi na ọ bụrụ na ị na-ele edemede a, debe onwe gị ụbọchị. Ma mgbe ahụ, maka Dan na Matt kpochapụwo, ụzọ itoolu iji drinkụọ mmiri na karama mmiri gị.
Nye gaara eche na ihe karịrị otu karịrị? Naanị pịa ebe ahụ.
Iwu ọ kwadoro ịgbanwe igwe silencer?
.B.igwe kwụ otu ebedabara na gbanwetụrụgbachi nkịtịna-emepụta mkpọtụ dịkarịa ala na decibel 120 ma na-adịkarị elu karịa decibel 130. Fancy keke na-emefu n'etiti Rs 1,000 na Rs 3,000 iji gbanwee iheiyuzuchausoro nke ọgba tum tum. Ndị ọrụ ụgbọ njem kwuru na mgbanwe nke ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe bụn'uzo na ezighi ezin’okpuru Iwu Motorgbọ ala.Jenụwarị 29. Ọkt 2018
Ọ bụ iwu ịmegharị igwe kwụ otu ebe na India?
Iwu Mbupu ụgbọ ala na-egbochi mgbanwe naIndia. Dị ka iwu si dị, ọ bụn'uzo na ezighi ezi gbanweenhazi ma ọ bụ agba nke ụgbọ. Iji mee mgbanweiwu, ndị nwe ga-enweta nke ọhụrụgbanwetụrụakụkụ nke ARAI kwadoro (Automotive Research Authority ofIndia) ma nweta akwụkwọ ndebanye aha akwadoro.8 jul. Ọkt 2018
WD40 ọ dị njọ maka ịya igwe kwụ otu ebe?
Enwere m ike ijiWD-40iji lube magbụ ígwè? Mba. I kwesịghị iji yaWD40dikayinyemmanu ebeWD-40B NOTGH a ezigbo mmanu ebe ọ bụ na ọ bụ isi ojiji dị ka ihe mgbaze ma ọ bụ nchara ngbasa.24.03.2020
Gịnị bụ iwu DB maka iyuzucha?
Nke ugbu aiwuoke mkpọtụ maka nkwado ụdị ụgbọ ala bụ 74decibel, na ọ bụ iwu na-akwadoghị gbanwee ihe a ụgbọ alaiyuzuchasistemụ iji mee ka ọ dị uzu karịa ọkwa ọ gafere iji kwado ya.June 8. Dec 2019
Enwere Challan na mgbachi silencer?
Nke a ga - ewetara gị nsogbu dị ka ndị uwe ojii nweere onwe ha itinyea challan. Ọtụtụ ihe ọtụtụ ná mba ahụ, ndị uwe ojii bukọọrọ anyịnya igwe, wepụrụjuuma bibie ha. Ngalaba ndị a abụghị naanị nsogbu nye onye nwe ya ma ọ ga - adị mma ma ị zere ha.Mar 31 2021
Gịnị kpatara mmachibido igwe 600cc na India?
Ezie na ọtụtụ nke mba Nsukka na-ere ha liter-klas ngwaahịa n'ụzọ iwu kwadoro naIndia, ọchịchị na-achị na mbụmachibidoro iwuibubata na ire nke600ccnkeọgba tum tumn'imeIndia. E mere iwu ahụ ka ohere ga-abaOnye Indiandị na-emepụta ihe na-eto eto n'ahịa.Dec. 30 2018
Kedu ụzọ kachasị mma iji chọọ igwe kwụ otu ebe?
Echiche Na-egbuke egbuke! Lee akwa akwụkwọ shelf! Tinye nkata na igwe kwụ otu ebe… ọbụna igwe kwụ otu ebe dị ka ihe ndozi picnic na nnọkọ ọzọ gị. awade a ghaghị ezigbo mma refurbished skuuta… M pụtara otú mara mma bụ nke a ??? Enyo enyo n’elu Mgbidi!
Kedu ihe m kwesịrị itinye na igwe kwụ otu ebe maka igwe kwụ otu ebe?
Kwa afọ gburugburu oge a, anyị nwere mmasị icho mma anyịnya igwe na-acha uhie uhie, ọcha na-acha anụnụ anụnụ na ọkọlọtọ na iyi mmiri ma sonyere ngagharị igwe agbata obi. Iji nyere aka kpalie igwe ịgba ịnyịnya ígwè gị, anyị chịkọtara ise ga-ahụ echiche maka ụbọchị ọmụmụ nke obodo anyị. … GA-EME. Hụrụ ndị a na azụmaahịa ma jiri ụbọchị 2 na-enyocha ịntanetị maka ha.
Kedu ihe ị ga-etinye na igwe kwụ otu ebe maka ekeresimesi?
Egwuregwu Igwe Igwe: Echiche dị mfe. Zụrụ ọkụ eriri ọkụ, belata ya, tinye ya na batrị, kpaa ya na nkwupụta, ma ị nwere ọkụ ọkụ ọkụ maka ịnyịnya ígwè gị. Ma ọ dị oke nfe. Nke bụ eziokwu bụ na ọ gbagwojuru anya, ọ were obere oge.